Mediam-bahoaka28 Febroary 2019
Mediam-bahoaka27 Febroary 2019
Hafanam-po26 Febroary 2019
Iran: Tandindonin-doza ny ain'ilay bilaogera
Mediam-bahoaka25 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Andro maromaro izay no nitokona tsy nihinan-kanina i Hossein Ronaghi Maleki ilay bilaogera nogadraina. Natahorana ny toe-pahasalamany ary nentina nandritra ny adiny roa tany amin'ny hopitaly izy. Nisy gadra politika iray hafa ihany koa nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina mba ho...
Iran: Dimy tapitrisa dolara ho an'ny tetikasa sivana vaovao
Mediam-bahoaka24 Febroary 2019
Araka ny voalazan'ireo tranokalam-baovao maromaro, anisan'izany ny Roozonline, nilaza i Mahmoud Salarkia, izay tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitsaràna Iraniana fa dimy tapitrisa dolara no ampiasaina hamolavolàna fitaovana vaovao ho an'ny sivana
Iran: Tohidloo, nosamborina ilay bilaogera reformista
Mediam-bahoaka23 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nosamborina i Somayeh Tohidloo, vehivavy bilaogera reformista. Satria nihamitombo ny hetsi-panoherana nanohitra ny voka-pifidianana filoham-pirenena Iraniana dia nosamborin'ny manampahefana Iraniana ireo mpikatroka politika maromaro. Vao avy nanatontosa antsafa tamin'ny Aterineto izy sy ireo bilaogera roa niaraka tamin'ny filoha teo...
Voasivana ny tranonkala Fararu ao Iran
Mediam-bahoaka22 Febroary 2019
Nanambara [fa] ny tranonkalam-baovao Fararu ao Iran androany fa nosivanin'ny manampahefana Iraniana ny tranonkala. Tsy nahazo vaovao momba ny anton'ny sivana ireo mpitantana ny Fararu.
Hafanam-po20 Febroary 2019
Iran: Azo idirana indray ny tranonkala Fararu sy Twitter
Mediam-bahoaka20 Febroary 2019
Nitatitra ireo tranonkalam-baovao Iraniana fa azo idirana indray ny Twitter sy ny tranonkalam-baovao Fararu Iraniana.
Iran: Azo idirana indray ny FaceBook
Mediam-bahoaka19 Febroary 2019
Mitatitra ny tranokalam-baovao sy ny bilaogy Iraniana fa tsy voasivana intsony ny FaceBook any Iran. Milaza i Senoghteh fa nanery ny governemanta Iraniana hamerina indray ny FaceBook ny hetsika nasionaly sy iraisampirenena.